အပြာရုပ်ပုံလွှာစားသုံးမှုနှင့်ဆက်စပ်သော ဦး နှောက်ဖွဲ့စည်းပုံနှင့်အလုပ်လုပ်နိုင်သည့်ဆက်သွယ်မှု - Porn on Brain (2014) - သင့် ဦး နှောက်သည် Porn On
Published in ပြည်တွင်းသတင်း ဂျေအေအမ်အေစိတ်ရောဂါကုသမှု (မေလ၊ ၂၀၁၄) ဤသည်သည် porn အသုံးပြုသူများအတွက် ဦး နှောက်စကင်ဖတ်စစ်ဆေးမှုပထမအကြိမ်ဖြစ်သည်။ သုတေသီများသည် ဦး နှောက်ပြောင်းလဲမှုများစွာကိုတွေ့ရှိခဲ့ပြီးထိုအပြောင်းအလဲများသည် porn ပမာဏနှင့်ဆက်စပ်နေသည်။ ဘာသာရပ်များသည်အလယ်အလတ်ရှိသောညစ်ညမ်းသောသုံးစွဲသူများဖြစ်ပြီးစွဲလမ်းသူများအဖြစ်မသတ်မှတ်ပါ။ ဒီလေ့လာမှုမှာဂျာမနီရဲ့ Max Planck Institute မှကျွမ်းကျင်သူတွေက
1) တစ်ပတ်ကိုပိုမိုမြင့်မားနာရီ / ညစ်ညမ်းပိုနှစ်ပေါင်းအကျိုးကို circuitry ၏ကဏ္ဍများအတွက်မီးခိုးရောင်အမှု၌တစ်လျှော့ချရေး (ဆက်နွယ်နေကြောင်းကိုကြည့်ရှုခြင်းstriatum) လှုံ့ဆျောမှုနှင့်ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်ခြင်းတွင်ပါဝင်ပတ်သက်။ ဒီဆုလာဘ်-related ဒေသတွင်း၌လျှော့ချမီးခိုးရောင်ကိစ္စနည်းပါးလာအာရုံကြောဆက်သွယ်မှုကိုဆိုလိုသည်။ ဤနေရာတွင်နည်းပါးလာအာရုံကြောဆက်သွယ်မှုကိုမကြာခဏခေါ်သောနှေးကွေးဆုလာဘ်လှုပ်ရှားမှု, ဒါမှမဟုတ်တစ်ဦးထုံအပျြောအပါးတုံ့ပြန်မှုစ desensitization။ အဆိုပါသုတေသီများရေရှည်ညစ်ညမ်းထိတွေ့မှု၏သက်ရောက်မှုတစ်ခုအရိပ်အယောင်အဖြစ်ဤအနက်။ ခဲစာရေးသူက ဆီမှKühnကပြောပါတယ်:
2) အကျိုးကိုစနစ်နှင့် prefrontal cortex အကြားအာရုံကြောဆက်သွယ်မှုကိုစောင့်ကြည့်တိုးမြှင့် porn နှင့်အတူပိုဆိုးလာတယျ။ လေ့လာမှုကရှင်းပြသည်အဖြစ်,
3) လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပုံရိပ်တွေထိတွေ့သည့်အခါယင်းထက်ပိုသောညစ်ညမ်းနည်းဆုလာဘ် system ကို activation ကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ တစ်ဦးကဖြစ်နိုင်သမျှရှင်းပြချက်မိုးသည်းထန်စွာအသုံးပြုသူများကနောက်ဆုံးမှာမိမိတို့အကျိုးကို circuitry တက်ပစ်ခတ်ဖို့ပိုဆွလိုသည်။ Desensitization, သည်းခံစိတ်မှဦးဆောင်စှဲအမျိုးမျိုးတို့ကိုထဲမှာဘုံဖြစ်ပါတယ်။ လေ့လာမှုကဆိုပါတယ်,
Kühnတည်ဆဲစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ, သိပ္ပံနည်းကျစာပေ porn ၏စားသုံးသူဝတ္ထုနှင့်ပိုပြီးအစွန်းရောက်လိင်ဂိမ်းတွေနဲ့ပစ္စည်းရှာကြလိမ့်မည်အကြံပြု says:
အထက်ပါတွေ့ရှိချက်များကန့ ်. နှစ်ခုမူလတန်းအငြင်းပွားမှုများဖျက်သိမ်း porn စွဲ naysayers:
ထိုစွဲလမ်းမှုသည်“မြင့်မားသောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒ“ အဖြစ်မှန် - အဆိုးရွားဆုံးသောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံလွှာအသုံးပြုသူများသည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာရုပ်ပုံများကိုတုံ့ပြန်မှုအနည်းဆုံးဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်မြင့်မားသော“ လိင်ဆန္ဒ” မဟုတ်ပါ
ဒါက compulsive porn အသုံးပြုမှုလေ့မောင်းနှင်, ဒါမှမဟုတ်အလွယ်တကူပျင်းဖြစ်လာနေသည်။ ဤစကားမှန်ပေမယ့်လေ့မကြာခဏဦးနှောက်ထဲမှာတိုင်းတာပွောငျးလဲနှငျ့ပတျသကျသောမခဏအကျိုးသက်ရောက်မှုအဖြစ်သတ်မှတ်ထားသည်။
တက် Sum ရန်: လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပုံရိပ်တွေကြည့်ရှုတဲ့အခါမှာလျော့နည်းမီးခိုးရောင်ကိစ္စနဲ့ (dorsal striatum အတွက်) လျှော့ချဆုလာဘ်စနစ်ကလှုပ်ရှားမှုဆက်နွယ်နေကြောင်းပိုညစ်ညမ်းအသုံးပြုခြင်း။ ပိုများသော porn အသုံးပြုမှုသည်လည်းငါတို့ willpower များ၏ထိုင်ခုံ, အတိုကျရိုကျ cortex နှင့်အကျိုးကိုသည့်စနစ်အကြားအားနည်းဆက်သွယ်မှုဆက်နွယ်နေကြောင်း။ မီဒီယာလွှမ်းခြုံ:
အဆိုပါမက် Planck အင်စတီကျုကနေသတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း
ညစ်ညမ်းအင်တာနက်ပေါ်ရှိသည်ထင်ရှားအစဉ်အဆက်ကတည်းကအစဉ်အဆက်အရင်ကထက်ပိုပြီးလက်လှမ်းဖြစ်လာသည်။ ဤသည်မှာတကမ္ဘာလုံးမြင့်တက်ဖြစ်သောညစ်ညမ်းစားသုံးမှုအတွက်ရောင်ပြန်ဟပ်နေသည်။ ဒါပေမယ့်ညစ်ညမ်းများ၏မကြာခဏစားသုံးမှုလူ့ဦးနှောက်အပေါ်အဘယ်အရာကိုအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသနည်း စိန့် Hedwig ဆေးရုံတွင်လူ့ဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့်စိတ်ရောဂါတက္ကသိုလ်ဆေးရုံ Charitable များအတွက်မက် Planck အင်စတီကျုအားဖြင့်တစ်ဦးကပူးတွဲလေ့လာမှုပဲထိုမေးခွန်းကိုကြည့်နေသည်။
ညစ်ညမ်းတဲ့လူမှုရေးမညီကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။ အနည်းငယ်က၎င်း၏အသုံးပြုမှုကိုမှဝန်ခံလိမ့်မည်, သေးသောစျေးကွက်ကြီးမားသည်။ Pre-အင်တာနက်ကလူ့အဖွဲ့အစည်းများတွင်ညစ်ညမ်းမကြာခဏလျှို့ဝှက်စွာဝယ်ယူကြရသည်။ ဒီနေ့အနည်းငယ်ကလစ်နှင့်အတူတစ်အိမ်မှာကွန်ပျူတာပေါ်မှာသမ္မာသတိနှင့်တိုက်ရိုက်ကြည့်ရှုအားပေးနိုင်ပါသည်။ ညစ်ညမ်းက်ဘ်ဆိုက်များကိုမကြာခဏအဓိကမီဒီယာနှင့်လက်လီဆိုဒ်များထက်ပိုမိုလည်ပတ်မှုဆွဲဆောင်, ဂျာမနီအတွက်အများဆုံးသွားရောက်လည်ပတ်က်ဘ်ဆိုက်များစာရင်းတို့တွင်အမြင့်မားသောအဆင့်အတန်းသတ်မှတ်။
ဒါပေမယ့်ညစ်ညမ်းပစ္စည်းများ၏စားသုံးမှုလူ့ဦးနှောက်အပေါ်အဘယ်အရာကိုအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသနည်း ဘာလင်အခြေစိုက်သုတေသနပညာရှင်များကဆီမှKühnနှင့်Jürgen Gallinat ဒီကိစ္စကိုသို့ကြည့်ရှုကြ၏။ အဆိုပါသိပ္ပံပညာရှင်များ 64 မှ 21 အသက် 45 အရွယ်ရောက်ပြီးသူလူတို့သညျကိုလေ့လာခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါဘာသာရပ်များပထမဦးဆုံးအညစ်ညမ်းသူတို့ရဲ့လက်ရှိစားသုံးမှုအကြောင်းမေးခဲ့ကြသည်။ ဥပမာ: "သင်ကရှုမြင်ကြဘူးမည်မျှနာရီတစ်ပတ်ပျမ်းမျှ for?" "သင်ညစ်ညမ်းပစ္စည်းသုံးပြီးခဲ့ကြသည့်အခါကတည်းက?" နှင့်ထို့နောက်စဉ်သံလိုက်ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှုပုံရိပ်များ၏အကူအညီဖြင့်, သုတေသီဦးနှောက်ဖွဲ့စည်းပုံနှင့်ဦးနှောက်လုပ်ငန်းဆောင်တာမှတျတမျးတငျထား ဘာသာရပ်များညစ်ညမ်းပုံရိပ်များကြည့်ရှုခဲ့ကြသည်။
အဆိုပါအကဲဖြတ်ဘာသာရပ်များ, ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုနှင့် striatum ရဲ့အသံအတိုးအကျယ်အကြားနှုတ်လက္ခဏာဆောင်သောဆက်စပ်မှုနှင့်အတူရက်သတ္တပတ်နှင့်၎င်းတို့၏ဦးနှောက်ထဲမှာမီးခိုးရောင်အမှုအလုံးစုံအသံအတိုးအကျယ်နှုန်းညစ်ညမ်းပစ္စည်းကြည့်ရှုသောဦးနှောက်၏ဧရိယာသုံးစွဲနာရီအရေအတွက်ကများအကြားချိတ်ဆက်မှုတွေ့ရှိရ အကျိုးကိုစနစ်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်တက်။ အဆိုပါဘာသာရပ်များပိုမိုညစ်ညမ်း, သူတို့ရဲ့ striatum ရဲ့သေးငယ်သည့်အသံအတိုးအကျယ်နှင့်ထိတွေ့ခဲ့သည်။ "ဒါဟာအရှိကိုညစ်ညမ်းပုံမှန်စားသုံးမှု, အကျိုးကို system ကို dulls ဆိုလိုနိုင်," ဆီမှKühn, လူ့ဖွံ့ဖြိုးရေးများအတွက်မက် Planck အင်စတီကျုမှာဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာစိတ်ပညာသုတေသနဧရိယာအတွက်လေ့လာမှုနဲ့သိပ္ပံပညာရှင်များ၏ဦးဆောင်ရေးသားသူကပြောပါတယ်။
အဆိုပါဘာသာရပ်များလိင်နှိုးဆွပုံရိပ်တွေကြည့်ရှုစဉ်တွင်ထို့အပြင်, အကျိုးကိုစနစ်လှုပ်ရှားမှုအဆင့်ခဲများနှင့်မမှန်သည်အသုံးပြုသူများအတွက်ထက်ညစ်ညမ်းများ၏မကြာခဏပုံမှန်အသုံးပြုသူများအများ၏ဦးနှောက်အတွင်းသိသိသာသာနိမ့်ခဲ့သည်။ "ကျနော်တို့ဒါကြောင့်မြင့်မားသောညစ်ညမ်းစားသုံးမှုနှင့်အတူဘာသာရပ်များအတူတူပင်ဆုလာဘ်အဆင့်ကိုရောက်ရှိဖို့အစဉ်အဆက်အားကောင်းလှုံ့ဆော်မှုလိုအပ်ယူဆ," ဆီမှKühnကပြောပါတယ်။ ဤသည်ကအခြားဦးနှောက်ဒေသများဖို့ striatum ရဲ့အလုပ်လုပ်တဲ့ဆက်သွယ်မှုအပေါ်တွေ့ရှိချက်များနှင့်ကိုက်ညီသည်: မြင့်သောညစ်ညမ်းစားသုံးမှုအကျိုးကိုဧရိယာနှင့် prefrontal cortex အကြားမှိန်ဖျော့ဆက်သွယ်ရေးနှင့်ဆက်စပ်ခံရဖို့ရှာတွေ့ခဲ့သည်။ အဆိုပါ prefrontal cortex, အတူတကွ striatum အတူလှုံ့ဆျောမှုအတွက်ပါဝင်ပတ်သက်သည်နှင့်အကျိုးကို-ရှာကြံ drive ကိုထိန်းချုပ်ဖို့ပုံပေါ်ပါတယ်။
ယင်းလျော့နည်းသွားဆက်သွယ်မှုအတွေ့အကြုံကို-မှီခိုအာရုံခံ plasticity ၏လက္ခဏာသက်သေဖြစ်ဖြစ်စေအကျိုးကို system ပေါ်တွင်ညစ်ညမ်းစားသုံးမှု၏အကျိုးသက်ရောက်မှု ie, ဒါမှမဟုတ်တနည်း: အဆိုပါသုတေသီများ striatum နှင့်အခြားဦးနှောက်ဧရိယာများအကြားဆက်သွယ်မှုအပေါ်တွေ့ရှိချက်နည်းလမ်းနှစ်ခုအတွက်အဓိပ္ပာယ်ကောက်ယူနိုင်ယုံကြည်ပါတယ် ဒါကြောင့်ညစ်ညမ်းစားသုံးမှုအဆင့်ဆုံးဖြတ်သည်တစ်ခုမရှိမဖြစ်လိုအပ်ချက်ဖြစ်နိုင်ဘူး။ အဆိုပါသုတေသီများပထမဦးဆုံးအနက်ကိုပိုမိုဖြစ်နိုင်ဖွယ်ရှင်းပြချက်ကြောင်းထင်ပါတယ်။ "ကျနော်တို့မကြာခဏညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုဤပြောင်းလဲစေပါတယ်ယူဆ။ ကျနော်တို့ကိုတိုက်ရိုက်ဒီသရုပ်ပြနောက်ဆက်တွဲလေ့လာမှုများစီစဉ်နေတာ, "Jürgen Gallinat, စိန့် Hedwig ဆေးရုံမှာစိတ်ရောဂါတက္ကသိုလ်ဆေးရုံ Charitable မှာလေ့လာမှုနှင့်စိတ်ရောဂါပူးတွဲရေးသားသူကထပ်ပြောသည်။
Kuhn & Gallinat မှဤသုံးသပ်ချက်ကို ၂၀၁၆ ခုနှစ်မေလတွင်တင်ပြခဲ့သည် - Hypersexuality ၏ Neurobiological အခြေခံ (2016)။ ပြန်လည်သုံးသပ်မှုတွင် Kuhn & Gallinat တို့၏ ၂၀၁၄ fMRI လေ့လာမှုကိုဖော်ပြပါ
ကျွန်ုပ်တို့၏အဖွဲ့မှမကြာသေးမီကပြုလုပ်သောလေ့လာမှုတစ်ခုတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျန်းမာသောအထီးကျန်ပါဝင်သူများကိုစုဆောင်းခဲ့ပြီးလိင်မှုဆိုင်ရာရုပ်ပုံများအပေါ် fMRI ၏တုန့်ပြန်မှုနှင့်သူတို့၏ ဦး နှောက်ပုံသဏ္ologyာန်နှင့်အတူညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများနှင့်အတူတကွလေ့လာခဲ့သည့်အချိန်များနှင့်ဆက်စပ်ခဲ့သည် (Kuhn & Gallinat, 2014) ။ သင်တန်းသားများကိုနာရီများများကညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာရွက်များစားသုံးခြင်းကိုသတင်းပို့ကြလေလေ၊ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေကြည့်ခြင်းကိုကြည့်ရှုခြင်းအတွက်နာရီပေါင်းများစွာသည် striatum ရှိမီးခိုးရောင်အမှုန်များနှင့်ဆက်စပ်နေသည်ဟုတွေ့ရှိရပြီး၊ မှန်မှန်ကန်ကန် ventral putamen သို့ရောက်ရှိသည်။ ကျနော်တို့ဦးနှောက်တည်ဆောက်ပုံအသံအတိုးအကျယ်လိုငွေပြမှုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုမှ desensitization ပြီးနောက်သည်းခံစိတ်၏ရလဒ်များကိုရောင်ပြန်ဟပ်စေခြင်းငှါသုံးသပ်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါ Voon နေဖြင့်ဖော်ပြခဲ့သည်ရလဒ်များနှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဘက်များအကြားကွာဟမှုကျွန်တော်တို့ရဲ့သင်တန်းသားများကိုယေဘုယျလူဦးရေကနေစုဆောင်းခဲ့ကြခြင်းနှင့် hypersexuality ခံစားနေရပြီးအဖြစ်ရောဂါမဆိုတဲ့အချက်ကိုကြောင့်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ မေတ္တာနှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များ (2015) ကအကြံပြုအဖြစ်သို့ရာတွင်ထိုသို့ကောင်းစွာကြောင်းနေဆဲ (Voon အားဖြင့်လေ့လာမှုများတွင်အသုံးပြုအဖြစ်ဗီဒီယိုများမတူဘဲအတွက်) ညစ်ညမ်းအကြောင်းအရာပုံများ, ဒီနေ့ရဲ့ဗီဒီယိုကိုညစ်ညမ်းကြည့်ရှုကျေနပ်အောင်မည်မဟုတ်ပါနိုင်ပါသည်။ အလုပ်လုပ်တဲ့ဆက်သွယ်မှု၏စည်းကမ်းချက်များ၌, ငါတို့ထက်ပိုညစ်ညမ်းစားသုံးတဲ့သူသင်တန်းသားများကိုလက်ျာ caudate အကြားလျော့နည်းဆက်သွယ်မှုပြသ (volume ကိုသေးငယ်ဖြစ်ရှာတွေ့ခဲ့သည်ရှိရာ) နှင့် dorsolateral prefrontal cortex (DLPFC) left သော။ ကိုတွေ့ DLPFC အလုပ်အမှုဆောင်ထိန်းချုပ်မှုလုပ်ဆောင်ချက်များကိုတွင်ပါဝင်ပတ်သက်ခံရဖို့လူသိများဒါပေမယ့်လည်းမူးယစ်ဆေးမှ cue reactivity ကိုပါဝင်ပတ်သက်ခံရဖို့လူသိများသည်သာ။ DLPFC နှင့် caudate အကြား functional ဖြစ်စေဆက်သွယ်မှု၏တစ်ဦးသတ်သတ်မှတ်မှတ်ပြတ်တောက်ထိုနည်းတူမူးယစ်ဆေးစွဲသူများအားအလားတူညစ်ညမ်းများ၏အာရုံကြောဆက်စပ်စေသည်ထားတဲ့ဘိန်းဖြူ-စွဲပါဝင်သူ (ဝမ် et al ။ , 2013) တွင်ဖော်ပြခဲ့သည်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုပါ 2014 ကင်းဘရစ် fMRI လေ့လာမှု porn စွဲ (အပေါ်Voon et al ။, 2014) ကဆွေးနွေးမှုအပိုင်းများတွင်ဤနှစ်ခုလေ့လာမှုများအကြားခြားနားချက်များကရှင်းပြသည်:
ရှင်းလင်းပြတ်သားစွာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှု activated ဒေသများမှကျန်းမာစေတနာ့ဝန်ထမ်းအတွက်ဦးနှောက်လှုပ်ရှားမှုအပေါ်စာပေနှင့်အတူစောင့်ရှောက်ခြင်းတှငျကြှနျုပျတို့ ventral, အ occipito-ယာယီနှင့် parietal cortical, insula, cingulate နှင့် orbitofrontal နှင့်ယုတ်ညံ့တိုကျရိုကျ cortical, Pre-အလယ်ပိုင်း gyrus, caudate အပါအဝင်အလားတူကွန်ယက်ကိုပြသ striatum, pallidum, amygdala, substantia nigra နှင့် hypothalamus 13-19. ကျန်းမာယောက်ျားတွင်အွန်လိုင်းရှင်းလင်းပြတ်သားစွာပစ္စည်းများအသုံးပြုမှုပိုရှည်ကြာချိန် desensitization တစ်အလားအလာအခန်းကဏ္ဍအကြံပြုခြင်းနေဆဲရှင်းလင်းပြတ်သားစွာပုံရိပ်တွေရှင်းလင်းဖို့အောက်ပိုင်းလက်ဝဲ putaminal လှုပ်ရှားမှုနှင့်အတူပတျသကျပြထားပြီး 23. ဆနျ့ကငျြ, ဒီလက်ရှိလေ့လာမှုအနှုတ်လက္ခဏာအကျိုးဆက်များနှင့်ဆက်စပ်အသုံးပြုမှုကိုထိန်းချုပ်နှင့်အတူအခက်အခဲအားဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာ CSB နဲ့ရောဂါဗေဒအဖွဲ့ကိုအာရုံစိုက်။ ထို့အပွငျ, ဒီလက်ရှိလေ့လာမှုအကျဉ်းနေဆဲပုံရိပ်တွေကိုမှနှိုင်းယှဉ်ပါကဗီဒီယိုမှတ်တမ်းများကိုအသုံးပြုသည်။ ကျန်းမာစေတနာ့ဝန်ထမ်းခုနှစ်တွင်, ဗီဒီယိုကလစ်ပ်နှိုင်းယှဉ်ခေါ်ဆောင်သွားနေဆဲပုံရိပ်တွေ၏ကြည့်ရှု hippocampus, amygdala နှင့် posterior ယာယီနှင့် parietal cortical အပါအဝင်တစ်ဦးထက်ပိုသောကန့်သတ် activation ပုံစံရှိပါတယ် 20 အကျဉ်းချုပ်ကိုနေဆဲပုံရိပ်တွေနဲ့ဒီလက်ရှိလေ့လာမှုများတွင်အသုံးပြုကြာကြာဗီဒီယိုများအကြားဖြစ်နိုင်ခြေအာရုံကြောကွဲပြားခြားနားမှုအကြံပြုခြင်း. ထို့အပြင်ထိုကဲ့သို့သောကင်းအသုံးပြုမှုမမှန်အဖြစ်စွဲလမ်းပုံမမှန်လည်းအပန်းဖြေကင်းအသုံးပြုသူများကိုအာရုံစူးစိုက်မှုဘက်လိုက်မှုမြှင့်တင်ရန်ရှိသည်ဟုပြကြပြီမဟုတ်သော်လည်းတိုးမြှင်အာရုံကိုဘက်လိုက်မှုနှင့်ဆက်စပ်ခံရဖို့ပြသပြီ 66 မှီခိုအသုံးပြုသူများကိုနှိုင်းယှဉ်အပန်းဖြေအကြားအလားအလာကွဲပြားခြားနားမှုအကြံပြုခြင်း. ထိုကဲ့သို့သောအဖြစ်, လေ့လာမှုများအကြားကွဲပြားခြားနားမှုလူဦးရေသို့မဟုတ် task ထဲမှာကွဲပြားခြားနားမှုကိုထင်ဟပ်စေခြင်းငှါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏လေ့လာမှုရှင်းလင်းပြတ်သားစွာအွန်လိုင်းပစ္စည်းများမှဦးနှောက်တုံ့ပြန်မှုရှင်းလင်းပြတ်သားစွာအွန်လိုင်းပစ္စည်းများမိုးသည်းထန်စွာအသုံးပြုသူများကဖြစ်ပေမယ့်အပျက်သဘောအကျိုးဆက်များနှင့်အတူထိန်းချုပ်မှုသို့မဟုတ်အသင်းအဖွဲ့များ၏ဆုံးရှုံးမှုမရှိဘဲစခွေငျးငှါအဘယ်သူသည်ကျန်းကျန်းမာမာတစ်ဦးချင်းစီမှနှိုင်းယှဉ်ပါက CSB နှင့်အတူဘာသာရပ်များအကြားကွဲပြားစေခြင်းငှါအကြံပြုထားသည်။
လေ့လာမှု - Pornography စားသုံးမှုနဲ့ဆက်စပ်နေတဲ့ ဦး နှောက်ဖွဲ့စည်းပုံနဲ့အလုပ်လုပ်နိုင်တဲ့ဆက်သွယ်မှု - Porn on Brain
ြဒပ်မဲ့သော | နည်းနာ | ရလဒ် | ဆွေးနွေးရန် | ကောက်ချက် | ဆောငျးပါးသတင်းအချက်အလက်များ | အညွှန်း
Object.sci-hub.orgive မကြာခဏညစ်ညမ်းစားသုံးမှုဟာ frontostriatal ကွန်ယက်ကိုနှင့်ဆက်စပ်နေသည်ရှိမရှိဆုံးဖြတ်ရန်။
ရုပ်ရှင်များတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းအရာပုံဖော်ရိုက်ကူးမှု, ဂီတဗွီဒီယိုများနှင့်အင်တာနက်ကိုမကြာသေးမီနှစ်များအတွင်းတိုးမြှင့်ပါပြီ။1 အင်တာနက်ကိုစည်းမျဉ်းဘာသာရပ်မဟုတ်ပါဘူးကြောင့်, ဒါကြောင့်ညစ်ညမ်း၏စောင်ရေများအတွက်မော်တော်ယာဉ်အဖြစ်ပေါ်ထွက်လာခဲ့သည်။ ညစ်ညမ်းပုံရိပ်များမဟုတ်ဘဲအများပြည်သူအရွယ်ရောက်ပြီးသူစာအုပ်ဆိုင်သို့မဟုတ်ရုပ်ရှင်ရုံထဲမှာထက်အင်တာနက်မှတဆင့်တဦးတည်းရဲ့အိမျ၏ privacy ကိုအတွက်စားသုံးမှုများအတွက်ရရှိနိုင်ပါသည်။ ထို့ကြောင့်ရယူသုံးရေး, တတ်နိုင်နှင့်အမည်ဝှက်2 ပိုမိုကျယ်ပြန်ပရိသတ်ကိုဆွဲဆောင်ကြသည်။ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌သုတေသန 66 ယောက်ျား၏% နှင့်အမျိုးသမီး၏ 41% လစဉ်အခြေခံပေါ်မှာညစ်ညမ်းလောင်ကြောင်းပြသခဲ့သည်။3 internet traffic များအားလုံးကို၏ခန့်မှန်းခြေ 50% လိင်ဆက်ဆံမှုမှဆက်စပ်ဖြစ်ပါတယ်။4 ဤရွေ့ကားရာခိုင်နှုန်းညစ်ညမ်းမရှိတော့လူနည်းစုလူဦးရေပြဿနာဒါပေမယ့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လူ့အဖွဲ့အစည်းသြဇာလွှမ်းမိုးတဲ့အစုလိုက်အပြုံလိုက်ဖြစ်ရပ်ဆန်းကြောင်းဖော်ပြခဲ့သည်။ စိတ်ဝင်စားစရာ, ထိုဖြစ်ရပ်ဆန်းလူသားကန့်သတ်မထားဘူး, လတ်တလောလေ့လာမှုအထီးဟာ Macaque မျောက်အမျိုးသမီးမျောက် '' ခွများ၏ရုပ်ပုံများကိုစောင့်ကြည့်ဖို့သီးဖျော်ရည်ကိုဆုလာဘ်အပ်ကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။5
ညစ်ညမ်းစားသုံးမှု၏ကြိမ်နှုန်းလူသားများတွင်အမျိုးမျိုးသောအနုတ်လက္ခဏာရလဒ်အစီအမံကြိုတင်ခန့်မှန်းဖို့ပြသလျက်ရှိသည်။ ဆယ်ကျော်သက်ယောက်ျားလေးများအပေါ်တစ်ဦးကကိုယ်စားလှယ်ဆွီဒင်လေ့လာမှုနေ့စဉ်စားသုံးမှုနှင့်အတူယောက်ျားလေးများညစ်ညမ်း၏ deviant နှင့်တရားမဝင်အမျိုးအစားများကိုပိုမိုစိတ်ဝင်စားမှုပြနှင့်ပိုပြီးမကြာခဏအစစ်အမှန်ဘဝတှငျတှေ့မွငျခဲ့သညျအဘယျသို့ actualize ဖို့ဆန္ဒအစီရင်ခံကြောင်းပြသထားပါတယ်.1,6- 8 မိတ်ဖက်များတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျေနပ်မှုအတွက်ကျဆင်းခြင်းနှင့်ညစ်ညမ်း script များချမှတ်ရန်သဘောထားကိုမကြာခဏအင်တာနက်ကိုညစ်ညမ်းစားသုံးမှုနှင့်ဆက်စပ်ခဲ့ကြ.9 အင်တာနက်အသုံးပြုသူများအောက်ပါတစ်ဦးက longitudinal လေ့လာမှုညစ်ညမ်းအွန်လိုင်းကိုရယူသုံး 1 တစ်နှစ်အကြာတွင် compulsive ကွန်ပျူတာအသုံးပြုမှုကြိုတင်ခန့်မှန်းချက်ခဲ့ကြောင်းတွေ့ရှိရထားပါတယ်.10 အတူတူခေါ်ဆောင်သွားသည်ဖျောပွတွေ့ရှိချက်ညစ်ညမ်းသည့်အပြုအမူနှင့်၎င်း၏စားသုံးသူများ၏လူမှုရေးသိမှတ်ခံစားမှုတခုတခုအပေါ်မှာသက်ရောက်မှုရှိပါတယ်သောယူဆချက်ကိုထောကျပံ့။ ထို့ကွောငျ့ကြှနျုပျတို့ပင် nonaddicted အဆင့်တွင်, ဦးနှောက်ဖွဲ့စည်းပုံနှင့် function ကိုတခုတခုအပေါ်မှာသက်ရောက်မှုရှိစေခြင်းငှါ, ထိုညစ်ညမ်းစားသုံးမှုယူဆ။ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့၏အသိပညာရန်, ဦးနှောက်မကြာခဏညစ်ညမ်းစားသုံးမှုနှင့်အတူဆက်စပ်ယခုအထိစုံစမ်းစစ်ဆေးကြပြီမဟုတ်ဆက်နွယ်နေပါသည်။
စွဲသုတေသနကနေယူသီအိုရီအလားတူတစ်ခုကိုညစ်ညမ်းအကျိုးကိုကွန်ယက်ကိုအတွက်အာရုံကြောတုံ့ပြန်မှုတစ်ခု downregulation သို့မဟုတ်လေ့တစ် prewired, သဘာဝကြိုးလှုံ့ဆော်မှုများနှင့်ထိတွေ့မှုရလဒ်၏မြင့်မားသောအဆင့်ဆင့်ဖွဲ့စည်းကြောင်းပေါ်ပြူလာသိပ္ပံစာပေအတွက်ခန့်မှန်းသုံးသပ်သည်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ဤသည်ညစ်ညမ်းမှလျော့နည်းတုံ့ပြန်မှုဖြစ်လာ, ဦးနှောက်ပြန်ပေးဆွဲထားတဲ့အတွက်သပ္ပါယ်ဖြစ်စဉ်များထုတ်ယူနိုင်ရန်ယူဆနေသည်.11 စွဲလမ်း၏အာရုံကြောအလွှာထိုကဲ့သို့သော midbrain dopamine အာရုံခံခြင်း, striatum, နှင့် prefrontal cortex အဖြစ်အကျိုးကိုကွန်ယက်၏အစိတ်အပိုင်းဖြစ်ကြောင်းဦးနှောက်ဧရိယာများထားရှိရေးကြောင်းဘုံသဘောတူညီချက်ရှိပါသည်။12,13 အဆိုပါ striatum မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှု compulsive အပြုအမူဆီသို့ဦးတည်ဖြစ်စဉ်များသည့်အခါအလေ့အထဖွဲ့စည်းရေးတွင်ပါဝင်ပတ်သက်ခံရဖို့ယူဆနေသည်။14 အထူးသဖြင့်အဆိုပါ ventral striatum အလွဲသုံးစားမှုအမျိုးမျိုးမူးယစ်ဆေးဝါး cue-reactivity ကိုအပြောင်းအလဲနဲ့တွင်ပါဝင်ပတ်သက်ရမည်ကိုပြသထားသည်15 ဒါပေမယ့်လည်းအသစ်အဆန်းရဲ့အပြောင်းအလဲနဲ့၌တည်၏။16 စိတ်မချရသော prefrontal cortex function ကိုလူသားများနှင့်တိရိစ္ဆာန်များအတွက်ဘုံပစ္စည်းဥစ္စာအလွဲသုံးစားမှုမမှန်အပေါ်သုတေသနပြုတှငျဆှေးနှေးအဓိက neurobiological ပြုပြင်မွမ်းမံကြားတွင်ဖြစ်ပါသည်။17 လူသားတွေအတွက် pharmacological စွဲအပေါ်လေ့လာမှုများအတွက်, ထုထည်ကြီးမားသောပြောင်းလဲအဆိုပါ striatum နှင့် prefrontal cortex မှာပြပြီ။18- 20
ပစ္စုပ္ပန်လေ့လာမှုအတွင်းကျနော်တို့ကဒီဘုံအပြုအမူအချို့ဦးနှောက်တိုင်းဒေသကြီးများ၏ဖွဲ့စည်းပုံနှင့် function ကိုနှင့်ဆက်စပ်နေသည်ရှိမရှိလေ့လာစူးစမ်းဖို့ကျန်းမာသောလူဦးရေအတွက်မကြာခဏ-မဟုတ်သေချာပေါက်စွဲလမ်း-ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုနှင့်ဆက်စပ်သည့်အာရုံကြောဆက်စပ်စုံစမ်းစစ်ဆေးရန်ထွက်ထားကြ၏။
ခြောက်ဆယ်လေးကျန်းမာအထီးသင်တန်းသားများကိုစုဆောင်းခဲ့ကြ ([SD က] အသက်, 28.9 [6.62] အနှစ်အကွာအဝေး 21-45 နှစ်ပေါင်းဆိုလို) ။ အဆိုပါကြော်ငြာများတွင်ညစ်ညမ်းစားသုံးမှုပေါ်မှာငါတို့အာရုံစိုက်ဖော်ပြခဲ့တဲ့မခံ, အစားကျနော်တို့သံလိုက်ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှုပုံရိပ် (MRI) တိုင်းတာအပါအဝင်တစ်သိပ္ပံနည်းကျလေ့လာမှုမှာပါဝင်စိတ်ဝင်စားကျန်းမာသင်တန်းသားများကိုကိုင်တွယ်။ ယောက်ျားတစ်ဦးအငယ်အသက်အရွယ်မှာညစ်ညမ်းထိတွေ့ကြောင့်ကျနော်တို့ကပိုညစ်ညမ်းတို့ကိုလောင်ပါအထီးကြှနျတျောတို့၏နမူနာကန့်သတ်,21 နှင့်အမျိုးသမီးနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပြဿနာများကြုံတွေ့ရဖို့ပိုများပါတယ်။22 ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအင်တာဗျူးများအရ (Mini-အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအာရုံကြောဆိုင်ရာစိတ်ရောဂါအင်တာဗျူး23) သင်တန်းသားများကိုမဆိုစိတ်ရောဂါမမှန်ရှိသည်မဟုတ်ခဲ့ပေ။ သည်အခြားဆေးဘက်ဆိုင်ရာနှင့်အာရုံကြောချို့ယွင်းဖယ်ထုတ်ထားခဲ့သည်။ ပစ္စည်းဥစ္စာကိုအသုံးပြုခြင်းဂရုတစိုက်ပြခဲ့သည်။ အားလုံးတစ်ဦးချင်းစီအဘို့ဖယ်စံသည့် MRI အတွက်မူမမှန်ခဲ့သညျ။ အဆိုပါလေ့လာမှုကိုဘာလင်, ဂျာမနီအတွက်မေတ္တာတရားကိုတက္ကသိုလ်ဆေးခန်းမှာဒေသခံကျင့်ဝတ်ကော်မတီကအတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါလေ့လာမှု၏ပြီးပြည့်စုံသောဖော်ပြချက်ပြီးနောက်ကျနော်တို့သင်တန်းသားများအနေဖြင့်အသိပေးရေးသားထားသောသဘောတူညီချက်ရရှိခဲ့သည်။
ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံပုံရိပ်တွေဟာ T3 မာန်တင်းသံလိုက်-ပြင်ဆင်ထား gradient ကို-ပဲ့တင်သံ sequence ကို (အထပ်ထပ်အချိန် = 12 မီလီစက္ကန်သုံးပြီး 1-ရုပ်သံလိုင်းခေါင်းကိုကွိုင်နှင့်အတူတစ်ဦး 2500-T ကစကင်နာ (Siemens) ရက်တွင်ကောက်ယူကြသည် ဟူ. ၎င်း, အချိန် = 4.77 မီလီစက္ကန်ပဲ့တင်သံ; ပြောင်းပြန်လှန်အချိန် = 1100 မီလီစက္ကန် , ဝယ်ယူ matrix ကို = 256 × 256 × 176; လှန်ထောင့် =7°; 1 × 1 × 1 မီလီမီတာ3 voxel အရွယ်အစား) ။
functional ကျိန်းဝပ်ပြည်နယ်ပုံရိပ်တွေဟာ T2 * echoplanar ပုံရိပ် sequence ကို (အထပ်ထပ်အချိန် = 2000 မီလီစက္ကန်, ပဲ့တင်သံအချိန် = 30 မီလီစက္ကန်, ပုံရိပ် matrix ကို = 64 × 64, အမြင် = 216 မီလီမီတာ, လှန်ထောင့် = 80 °, အချပ်အထူ၏လယ်ပြင် -weighted သုံးပြီးစုဆောင်းခဲ့ကြ = 3.0 မီလီမီတာ, အကွာအဝေးအချက် = 20%,3×3×3မီလီမီတာ၏ voxel အရွယ်အစား3, 36 axial ချပ်,5မိနစ်) ။ သင်တန်းသားများကိုသူတို့မျက်စိပိတ်လိုက်ပြီးအနားယူရန်ညွှန်ကြားထားခဲ့သည်။ တူညီတဲ့ sequence ကို task ကို-related ပုံရိပ်တွေဆည်းပူးဖို့အသုံးပြုခဲ့ပါတယ်။
ကျနော်တို့ညစ်ညမ်းစားသုံးမှုအကဲဖြတ်ရန်အောက်ပါမေးခွန်းများကိုအုပ်ချုပ်: "ဘယ်နှစ်ယောက်နာရီပျမ်းမျှအားပေါ်တွင်သင်တစ်ပါတ်တစ်နေ့တာအတွင်းညစ်ညမ်းပစ္စည်းကိုကြည့်ဖြုန်းသလဲ? " နှင့် "ဘယ်နှစ်ယောက်နာရီပျမ်းမျှသင်တနင်္ဂနွေနေ့၌စဉ်အတွင်းညစ်ညမ်းပစ္စည်းကိုကြည့်ဖြုန်းသလဲ?" ဒီကနေကျနော်တို့ကို (အပတ်အတွင်းညစ်ညမ်းပစ္စည်းနှင့်အတူသုံးစွဲပျမ်းမျှနာရီတွက်ချက်ညစ်ညမ်းနာရီ [PHs]) ။ ယင်းအစီရင်ခံ PHs ၏ဖြန့်ဖြူး skewed နှင့်ပုံမှန်ဖြန့်ဖြူးမခံသောကြောင့် (Kolmogorov-Smirnov Z = 1.54; P <.05)၊ variable ကို square root (Kolmogorov-Smirnov) အားဖြင့်ပြောင်းလဲခဲ့သည်။ Z = 0.77; P = .59) ။ သူတို့ရဲ့လက်ရှိစားသုံးမှုအပြင်, ငါတို့သည်လည်းသူတို့ညစ်ညမ်းကျွမ်းလောင်ခဲ့သောမည်မျှနှစ်ပေါင်းသင်တန်းသားများကိုမေးတယ်။
ထို့အပွငျ, ကျနော်တို့ကိုအသုံးပြု အင်တာနက်ကိုလိင်စစ်ဆေးခြင်း Test24 (၎င်း၏ဂျာမန်ဘာသာပြန်ချက်အတွက်), တစ်ဦး 25-item ကို Self-rating အင်တာနက်ကိုတစ်ဦးတစ်ဦးချင်းစီရဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအသုံးပြုမှုကိုအကဲဖြတ်ရန်ဒီဇိုင်းတူရိယာများနှင့်တစ်ဦး အဆိုပါလိင်စွဲလမ်းမျက်နှာပြင်၏တိုတောင်းသောဗားရှင်း စမ်းသပ်25 (၎င်း၏ဂျာမန်ဘာသာပြန်ချက်အတွက်) လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွဲလက္ခဏာတွေအကဲဖြတ်ရန်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲ။ အင်တာနက်စွဲ၏သက်ရောက်မှုများအတွက်ထိန်းချုပ်ဖို့, ကျနော်တို့ကိုအသုံးပြု အင်တာနက်ကိုစွဲလမ်းမှု စမ်းသပ်26 (၎င်း၏ဂျာမန်ဗားရှင်း; အခေါက် et al နေဖြင့်လည်းယခုလေ့လာမှုကိုတွေ့မြင်27) 20 ပစ္စည်းများပါဝင်သည်ဟု။ ထိုမှတပါး, စိတ်ရောဂါရောဂါအမှတ်အသားများ, အမည်ရပစ္စည်းဥစ္စာအသုံးပြုခြင်းနှင့်စိတ်ကျရောဂါအကဲဖြတ်ရန်, ကျနော်တို့ကအုပ်ချုပ် အရက်ကိုအသုံးပြုခြင်း Disorder သတ်မှတ်ခြင်း စမ်းသပ်28 နှင့် Beck စီးပွားပျက်ကပ် Inventory.29
Cue-reactive Task ကို
ကျနော်တို့ကိုအသုံးပြု ညစ်ညမ်းဝက်ဘ်ဆိုက်များနှင့် 60 nonsexual ပုံရိပ်တွေကနေ 60 ရှင်းလင်းပြတ်သားစွာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပုံရိပ်တွေ, nonsexual လှုပ်ရှားမှုများ, အမည်ရရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလေ့ကျင့်ခန်းကာလအတွင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပုံရိပ်တွေအတွက်တစ်ဦးချင်းစီ၏နံပါတ်နှင့်လိင်မှလိုက်ဖက်။ အဆိုပါပုံတွေကိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့် nonsexual အခြေအနေများအဘို့အ6ပုံရိပ်တွေတစ်ဦးချင်းစီနှင့်အတူ 10 လုပ်ကွက်များတွင်တင်ဆက်ခဲ့ကြသည်။ တစ်ခုချင်းစီကို image ကိုပုံအကြောင်းအရာအသေးစိတ်စစ်ဆေးခြင်းရှောင်ရှားရန် 530 မီလီစက္ကန်အဘို့အပြခံခဲ့ရသည်။ Intertrial ကြားကာလ 500 နှင့်5စက္ကန့်အကြား 6.5 မီလီစက္ကန်၏ခြေလှမ်းများအတွက်ကွဲပြား။ လုပ်ကွက်ရှစ် 60-ဒုတိယ fixation ကာလနှင့်အတူလက်ဆွဲခဲ့ကြသည်။
ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဒေတာ voxel-based morphometry (VBM8 နှင့်အတူလုပ်ငန်းများ၌ခဲ့ကြသည်, http://dbm.neuro.uni-jena.de.sci-hub.org/vbm.html) နှင့်စာရင်းအင်း parametric မြေပုံ (SPM8, default parameters တွေကိုသုံးပြီး။ ဘက်လိုက်မှုဆုံးမခြင်း, တစ်သျှူးခွဲခြား, နှင့် affine မှတ်ပုံတင် VBM8 တွင်ပါဝင်ပတ်သက်နေကြသည်။ affine-မှတ်ပုံတင်မီးခိုးရောင်ကိစ္စ (GM) နှင့်အဖြူကိစ္စ (WM) အပိုင်းတစ် ဦး စိတ်ကြိုက် diffeomorphic ခန္ဓာဗေဒတည်ဆောက်ရန်အသုံးပြုခဲ့ကြသည်။ အဆိုးရွားဆုံးသော algebra template မှတဆင့်မှတ်ပုံတင်ခြင်း။ ပျက်စီးယိုယွင်းနေသော GM နှင့် WM အစိတ်အပိုင်းများကိုဖန်တီးသည်။ Jacobox determinants နှင့် modulation ကို voxel အတွင်းရှိတစ်ရှူးတစ်ခု၏ပမာဏကိုထိန်းသိမ်းရန်အသုံးပြုသည်။ GM ပမာဏအတိုင်းအတာအထိ ဦး တည်သည်။ အများဆုံးနှင့်တစ်ဝက်အမြင့်ဆုံး ၈ မီလီမီတာ။ GM နှင့် WM ပမာဏနှင့်လုံး ၀ ဦး နှောက်ဆက်စပ်မှုနှင့် PHs များကိုတွက်ချက်ခဲ့သည်။ အသက်နှင့်တစ်ကိုယ်ရေအတိုးပမာဏကိုစိတ် ၀ င်စားစရာ covariates များအဖြစ်ထည့်သွင်းခဲ့သည်။ P <.001 နှင့်စာရင်းအင်းအတိုင်းအတာတံခါးခုံ permutation အပေါ်အခြေခံပြီး nonstationary ချောချောမွေ့မွေ့ပြင်ဆင်ချက်နှင့်အတူပေါင်းစပ်မျိုးစုံနှိုင်းယှဉ်ဘို့ပြင်ပေးခဲ့သည်။30
Cue-reactive Functional MRI အားသုံးသပ်ခြင်း
လုပ်ငန်းလည်ပတ် MRI အချက်အလက်များ၏ Preprocessing Montreal အာရုံကြော Institute မှအာကာသမှအချပ်-အခြိနျဇယားဆုံးမခြင်း, ပထမဦးဆုံးအသံအတိုးအကျယ်မှ Spatial ရှိမယ်နှင့် nonlinear အတိုင် SPM8 သုံးပြီးဖျော်ဖြေခြင်းနှင့်ဖွဲ့စည်းခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ပုံရိပ်တွေထို့နောက်ဝက်အများဆုံးမှာ 8 မီလီမီတာ Full-width ကိုတစ် Gaussian kernel ကိုအတူပန်းခင်းလမ်းခဲ့ကြသည်။ တစ်ခုချင်းစီကိုပိတ်ပင်တားဆီးမှု (လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ nonsexual နှင့် fixation) တစ်ဦး hemodynamic တုံ့ပြန်မှု function ကိုအတူလုပ်ပါတယ်နှင့် convolved ခဲ့သည်။ လပ်ြရြားမြ parameters တွေကိုဒီဇိုင်း matrix တွင်ထည့်သွင်းခဲ့ကြသည်။ ကျနော်တို့ fixation နှင့် nonsexual ထိန်းချုပ်မှုအခွအေနေဆန့်ကျင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေကိုနှိုင်းယှဉ်ဟာဆနျ့ကငျြဘကိုစိတ်ဝင်စားခဲ့ကြသည်။ ကျနော်တို့ fixation vs ဟာဆနျ့ကငျြဘလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ cue နှင့်အတူ PHs correlating ဒုတိယအဆင့်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာဖျော်ဖြေခဲ့ပါတယ်။ တစ်အမြင့်တံခါးခုံ P <.001 ကိုအသုံးပြုခဲ့ပြီး Monte Carlo ခြင်း simulation မှစပျစ်သီးပြွတ်အရွယ်အစားကိုဆုံးမခဲ့သည်။ ဖော်ပြပြီးသည့်အတိုင်းရရှိလာသောမြေပုံများကိုအကန့်အသတ်ဖြင့်သာသတ်မှတ်ထားသည်။
အခြေခံအဆောက်အဦးများနှင့်အလုပ်လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းတာဝန်-related တွေ့ရှိချက်များအကြားဆက်ဆံရေးကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးရန်ရန်, အဓိကခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာအတွက်သိသာထင်ရှားသောပြွတ်ကနေအချက်ပြ2variable တွေကို (အကြား covariance ရှိမရှိစမ်းသပ်တဲ့ confirmatory ဖျန်ဖြေခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာသို့ထည့်သွင်းခဲ့သည်X နှင့် Y) (တတိယဖြန်ဖြေ variable ကိုတို့ကရှင်းပြခဲ့နိုင်M) ။ တစ်ဦးကသိသိသာသာဖျန်ဖြေအဘယ်သူ၏ပါဝင်သိသိသာသာအကြားအသင်းအဖွဲ့အပေါ်သက်ရောက်မှုတစ်ခုဖြစ်ပါသည် X နှင့် Y. ကျွန်တော်တို့သည်အညစ်ညမ်းစားသုံးမှုပေါ်သို့လက်ယာ striatum အတွက်အရင်းအမြစ် variable ကို GM က volume ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိမရှိရလဒ်ကို variable ကိုစမျးသပျ, လိင်-cue တင်ဆက်မှုစဉ်အတွင်းဘယ်ဘက် striatum ရဲ့အလုပ်လုပ်တဲ့ activation ကကမကထပြုခဲ့ခဲ့သည်။ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းကို MATLAB ကုဒ် https://web.archive.org/web/20150702042221/http://wagerlab.colorado.edu.sci-hub.org/ ကို သုံး၍ အရှိန်မြှင့်ထားသောလမ်းကြောင်းသုံးမော်ဒယ်ကို အခြေခံ၍ ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ စာရင်းအင်းအရေးပါမှု၏ဘက်လိုက်မှု - တညျ့ bootstrap စမ်းသပ်မှု။ အောက်ပါလမ်းကြောင်းများစမ်းသပ်ခဲ့ကြသည်: တိုက်ရိုက်လမ်းကြောင်းa(source ကိုဖျန်ဖြေ); သွယ်ဝိုက်လမ်းကြောင်းကိုb(ဖျန်ဖြေရလဒ်ကို); နှင့်ဖျန်ဖြေခြင်းအကျိုးသက်ရောက်မှု ab၏ထုတ်ကုန်aနှင့် b, အရင်းအမြစ်နှင့်ရလဒ်ကိုအကြားဆက်ဆံရေး (စုစုပေါင်းဆက်ဆံရေးလျှော့ချအဖြစ်သတ်မှတ်, c) ကိုမော်ဒယ် (တိုက်ရိုက်လမ်းကြောင်းသို့အာမခံအပါအဝင်အသုံးပြုပုံ က c '').
ပထမဦးဆုံးအ5volumes ကိုစွန့်ပစ်ခဲ့ကြသည်။ အချပ်အချိန်ကိုက်, ဦးခေါင်း-ရွေ့လျားမှုဆုံးမခြင်း, နှင့် Montreal အာရုံကြော Institute က template ကိုမှ Spatial ပုံမှန်အပါအဝင် data ကို preprocessing, နားခိုရာ-ပြည်နယ်အလုပ်လုပ်တဲ့ MRI များအတွက် SPM8 နှင့်ဒေတာများထုတ်ယူခြင်းလက်ထောက်သုံးပြီးကောက်ယူခဲ့ကြသည်။314မီလီမီတာတစ်ဦးက Spatial filter ကိုထက်ဝက်အများဆုံးမှာ Full-width ကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ linear ခေတ်ရေစီးကြောင်း preprocessing နှင့်တစ်ဦးခေတ္တယာယီတီးဝိုင်း-pass filter ကို (0.01-0.08 Hz) ကိုအသုံးပြုပြီးနောက်ဖယ်ရှားခံခဲ့ရသည်။32 ထို့အပြင်ကျနော်တို့ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာယုတ် signal ကိုအပါအဝင်စိတ်အညစ် covariates ၏ဆိုးကျိုးများ,6ရွေ့လျားမှု parameters တွေကို, cerebrospinal fluid ကနေ signal ကိုနှင့် WM ဖယ်ရှားခဲ့သည်။33 ကျနော်တို့ caudate အတွက်စပျစ်သီးပြွတ်ပါဝင်သည်ဟုမျိုးစေ့ဒေသနှင့်အတူအလုပ်လုပ်တဲ့ဆက်သွယ်မှုမြေပုံကွန်ပျူတာတစ်ခုရှာဖွေတူးဖော်ခွင့်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ရရှိလာတဲ့ functional-ဆက်သွယ်မှုမြေပုံများအားပူးတွဲညစ်ညမ်းစားသုံးမှုသည်နှင့်အညီအလေးချိန်ညာဘက် caudate နှင့်အတူ activated ခဲ့ဦးနှောက်ဒေသများကိုသိရှိနိုင်ဖို့ PHs ဆက်နွယ်နေကြောင်းခဲ့ကြသည်။ အဆိုပါမြေပုံများအားယခင်ကဖော်ပြထား (စပျစ်သီးပြွတ်တိုးချဲ့တံခါးခုံ = 39) အဖြစ် thresholded ခဲ့ကြသည်။
ပျမ်းမျှအားတွင်, သင်တန်းသားများကို 4.09 PHs အစီရင်ခံတင်ပြ (SD, 3.9; အကွာအဝေး, 0-19.5; ) rooted နှစ်ထပ်ကိန်းမဟုတ်။ အင်တာနက်ကိုလိင်စစ်ဆေးခြင်းစမ်းသပ်များ၏စံနှုန်းများအရ, 21 သင်တန်းသားများကိုအင်တာနက်ကလိင်စွဲလမ်း၏အန္တရာယ်မှာအဖြစ်ခွဲခြားဒါပေမယ့်အဖြစ်စွဲမခံခဲ့ရပါ။ Tသူကခြုံငုံအင်တာနက်ကိုလိင်စစ်ဆေးခြင်းစမ်းသပ်ရမှတ်အပြုသဘောအစီရင်ခံ PHs ဆက်နွယ်နေကြောင်းခဲ့သည် (r64 = 0.389, P <.01) ။ လိင်စွဲလမ်းမှုစစ်ဆေးခြင်းတွင်ပါဝင်သူများသည်ပျမ်းမျှ ၁.၃၅ (SD, 1.35) ရရှိခဲ့သည်။ တစ်ဦးကအပြုသဘောဆက်စပ်မှု PHs နှင့်အရက်ကိုအသုံးပြုခြင်း Disorder သတ်မှတ်ခြင်းစမ်းသပ်မှုရမှတ်အကြားလေ့လာတွေ့ရှိခဲ့သည် (r64 = 0.250, P <.05) နှင့် Beck စီးပွားပျက်ကပ် Inventory ရမှတ် (r64 = 0.295, P <.05) ။
GM က segment နှင့်အတူ PHs (စတုရန်းအမြစ်) correlating တဲ့အခါမှာကျနော်တို့ကလက်ျာ striatum အတွက်သိသာထင်ရှားသောအနုတ်လက္ခဏာအသင်းအဖွဲ့, အမည်ရ caudate နျူကလိယကိုတွေ့ (ထိုအလိုအလျောက်ခန္ဓာဗေဒတံဆိပ်ကပ် Atlas အပေါ်အခြေခံပြီး34; အထွတ်အထိပ် voxel: x = 11, y = 5, z = 3; P <.001; မျိုးစုံနှိုင်းယှဉ်) (ပုံ 1A) အတွက်တညျ့။ ကျွန်တော်တစ် ဦး နိမ့်တံခါးခုံကိုအသုံးပြုတဲ့အခါ P <.005, ဘယ်ဘက် caudate အတွက်အပိုဆောင်းစပျစ်သီးပြွတ်အရေးပါမှုသို့ရောက်ရှိ (x = -6, y = 0, z = 6), အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်း lateralized မဟုတ်ကြောင်းဖေါ်ပြခြင်း။ ကျနော်တို့စပျစ်သီးပြွတ် striatum အဖြစ်ရည်ညွှန်း; သို့သော်နောက်ဆက်တွဲဆွေးနွေးမှုအတွက်၎င်းအစုအဝေးသည်အိမ်တွင်းဆော့ဖ်ဝဲအားဖြင့်ဖန်တီးထားသည့် ventral striatum ၏အကျိုးစီးပွားဆိုင်ရာစာပေအခြေပြုဖြစ်နိုင်ချေရှိသောဒေသနှင့်အကျိုးတူလုပ်ဆောင်ခြင်းနှင့်အတူထပ်နေသည်ကိုမှတ်သားထိုက်သည်။35 (အများစုငွေကြေး-မက်လုံးပေးနှောင့်နှေးတာဝန်, eAppendix အတွက်ကြည့်ရှု နောကျဆကျတှဲ အသေးစိတ်ကို) ။
သိသိသာသာနှုတ်လက္ခဏာဆောင်သောဆက်စပ်မှု (ဖေါ်ပြခြင်းတစ်ဦး, ဦးနှောက်ဒေသr64 = -0.432, P <.001) တစ်ပတ်လျှင်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေသုံးစွဲမှု (စတုရန်းရင်းအမြစ်တွယ်နေသော) နှင့်မီးခိုးရောင်ကိစ္စအကြား (Montreal Neurological Institute ၏သြဒီနိတ်) ကြားတွင် x = 11, y = 5, z = 3) နှင့်ဆက်စပ်မှုသရုပ်ဖော်အဆိုပါ scatterplot ။ B, လိင်မှုဆိုင်ရာပြတ်လပ်မှုဖြစ်စဉ်၏တစ်ပတ်လျှင်နာရီညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေသုံးစွဲမှုနှင့်သွေးအောက်စီဂျင်အဆင့် - မှီခိုသောအချက်ပြမှုအကြားအပြန်အလှန်ဆက်စပ်မှု (Mont cue> fixation) (Montreal Neurological Institute မှကိုသြဒီနိတ်) x = -24, y = 2, z = 4) ။ ကို C, တစ်ပတ်လျှင်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာရွက်စားသုံးမှုနာရီနှင့်လက်ဝဲ dorsolateral prefrontal cortex အတွက်လက်ျာ striatum ၏အလုပ်လုပ်တဲ့ - ဆက်သွယ်မှုမြေပုံအကြားအပျက်သဘောဆက်စပ်မှု။
လက်ျာ caudate အတွက်စပျစ်သီးပြွတ်ကနေဖြည် GM ကတန်ဖိုးများကိုအဆိုးသည့်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကိုအတူတူအတိုင်းအတာမှာခဲ့သည်တဖြည်းဖြည်းတိုးပွားလာညစ်ညမ်းစားသုံးမှုနှင့်ဆက်စပ်လက်ရှိအစီရင်ခံ PHs အပေါ်အခြေခံပြီးတွက်ချက်ခြင်းနှင့်အနှစ်များ၏ခန့်မှန်းချက်ပေးခဲ့သည် (r64 = -0.329, P <.01); tမိမိအပုတစ်သက်တာကျော်စူးရှစားသုံးမှုနှင့်စုဆောင်းငွေပမာဏဟာ striatum အတွက်အနိမ့် GM ကတန်ဖိုးများနှင့်ဆက်နွယ်ခဲ့အတည်ပြုခဲ့သည်. အဘယ်သူမျှမဒေသ GM ကအသံအတိုးအကျယ်နှင့် PHs အကြားသိသိသာသာအပြုသဘောဆက်စပ်မှုပြသနှင့်မျှမတို့သိသာထင်ရှားစွာဆက်စပ် WM အတွက်တွေ့ရှိခဲ့သည်။
PHs အပြုသဘောကိုအင်တာနက်စွဲခြင်းနှင့်လိင်စွဲရမှတ်ဆက်နွယ်နေကြောင်းကြောင့် (အင်တာနက် Adddiction စမ်းသပ်ခြင်း, r64 = 0.489, P <.001; လိင်ဆိုင်ရာစိစစ်စစ်ဆေးမှု၊ r64 = 0.352, P <.01) ကျနော်တို့ PHs (စတုရန်းအမြစ်) နှင့်လက်ျာ caudate အတွက် GM အကြားဆက်စပ်မှုတွက်ချက် အဆိုပါမကြာခဏအင်တာနက်ကိုအသုံးပြုခြင်းသဖွငျ့အချက်များ၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှုများနှင့်လိင်စွဲလမ်းဖယ်ထုတ်အင်တာနက်စွဲလမ်းမှုစမ်းသပ်ခြင်းရမှတ်များနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွဲစမ်းသပ်မှုရမှတ်များအဘို့ကိုထိန်းချုပ်. အင်တာနက်စွဲအဘို့ကိုထိန်းချုပ်ကျနော်တို့ PHs နှင့်လက်ျာ caudate GM ကအသံအတိုးအကျယ်အကြားတစ်ဦးကအနုတ်အသင်းအဖွဲ့တွေ့ရှိခဲ့လျှင်ပင် (r61 = -0.336, P <.01); လိင်စွဲလမ်းများအတွက်ထိန်းချုပ်ထားသည့်အခါအလားတူအဆိုပါအသင်းအဖွဲ့နေဆဲသိသာခဲ့သည် (r61 = -0.364, P <.01) ။
Iကျနော်တို့ညစ်ညမ်းဝက်ဘ်ဆိုက်များတွင်ကောက်ယူရှင်းလင်းပြတ်သားစွာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဓာတ်ပုံများကိုတင်ဆက်ထားတဲ့အတွက် cue-reactivity ကိုပါရာဒိုင်း, na, ငါတို့ဘယ်ဘက် putamen အသွေးသည်အောက်ဆီဂျင်အဆင့်ကို-မှီခို (BOLD) signa အကြားတစ်ဦးကအနုတ်အသင်းအဖွဲ့တွေ့ရှိခဲ့ဌ (အထွတ်အထိပ် voxel: x = -24, y = 2, z = 4; putamen) (ဂဏန်း 1B) fixation နှင့် Self-အစီရင်ခံ PHs vs ဟာဆနျ့ကငျြဘလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ cue ၌တည်၏။ တစ်နိမ့်ခုံအသုံးပြုတဲ့အခါ P <.005, ညာဘက် putamen အတွက်နောက်ထပ်စပျစ်သီးပြွတ်အရေးပါမှုသို့ရောက်ရှိ (x = 25, y = -2, z = 10) ။
တူညီသောတံခါးခုံကို အသုံးပြု. fixation vs ဟာဆနျ့ကငျြဘ nonsexual cue ၏အချက်ပြနှင့်အတူ PHs correlating သောအခါအဘယ်သူမျှမကသိသိသာသာပြွတ်လေ့လာတွေ့ရှိခဲ့ကြသည်။ လိင် cue နှင့် nonsexual cue လုပ်ကွက်စဉ်အတွင်းဘယ်ဘက် putamen သီးပြွတ်၌ရာခိုင်နှုန်း signal ကိုအပြောင်းအလဲများလုပ်ပြီး Extract အခါ, ကျနော်တို့ nonsexual တွေကိုနှင့်နှိုင်းယှဉ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေကိုကာလအတွင်းသိသိသာသာမြင့်မားတဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေ့ရှိခဲ့ (t63 = 2.82, P <.01), ဘယ်ဘက် putamen အထူးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပုံရိပ်အကြောင်းအရာအားဖြင့် activated ကြောင်းအကြံပြုသည်။ ထို့အပြင်ကျနော်တို့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေကိုနှင့် fixatio အကြားသိသာထင်ရှားသောခြားနားချက်ကိုတွေ့n (t63 = 4.07, P <.001) nonsexual တွေကိုနှင့် fixation အကြားနှင့်မျှမတို့ခြားနားချက် (t63 = 1.30, P = .20) ။
task ကို-related BOLD တွေ့ရှိချက်နှင့် striatum အတွက်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာတွေ့ရှိချက်များအကြားဆက်ဆံရေး disentangle မှကျနော်တို့အလုပ်လုပ်တဲ့တွေ့ရှိချက်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံတွေ့ရှိချက်များနှင့်ညစ်ညမ်းစားသုံးမှုအကြား assumedly ကြောင်းကျိုးဆက်စပ်အသင်းအဖွဲ့ mediates ရှိမရှိတစ်ဖျန်ဖြေခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာစမ်းသပ်ခြင်းပြုလုပ်ခဲ့သည်။ လက်ျာ caudate အတွက် GM ကအကြားအသင်းအဖွဲ့ (X) နှင့် PHs (Y) (အာမခံဘယ်ဘက် putamen အတွက်တာဝန်-related BOLD activation ပါဝင်သည်ဟုရှိမရှိသိသာဖြစ်ပါသည်M) (ပါဝင်သည်က c '' = -11.97, P <.001) ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းအတွက်သို့မဟုတ်မ (c = -14.40, P <.001) ။ အကြားလမ်းကြောင်းကိန်း X နှင့် M (a = 4.78, P <.05) အဖြစ်အကြား M နှင့် Y (b = -0.50, P <.05) သိသာသည် (ပုံ 2).
မီးခိုးရောင်ကိစ္စအကြားအနုတ်လက္ခဏာအသင်းအဖွဲ့ (X) ကို voxel-based morphometry ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာနှင့်ညစ်ညမ်းစားသုံးမှု (အတွင်းဖော်ထုတ်ညာဘက် striatum အတွက်Y) ပြင်းပြင်းထန်ထန် (ဘယ်ဘက် striatum အတွက်အလုပ်လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းတာဝန်-ဆက်စပ်လှုပ်ရှားမှုကကမကထပြုခဲ့ခြင်းမရှိပါM), အခြေခံအဆောက်အဦးအဖြစ် functional ဖြစ်စေ, အကျိုးသက်ရောက်မှုများညစ်ညမ်းစားသုံးမှု၏ခန့်မှန်းရန်လွတ်လပ်စွာအထောက်အကူပြုကြောင်းဖေါ်ပြခြင်း။ a, b, AB, နှင့် C / C '' လမ်းကြောင်းကိန်းဖော်ပြသည်။aP <.05bP <.001
function PHs နှင့် ပတ်သက်. striatum ၏ညာဘက် caudate အတွက်ဒေသနှင့်ဆက်စပ်ဦးနှောက်ဒေသများစုံစမ်းစစ်ဆေးရန်, ကြှနျုပျတို့သညျဤစပျစ်သီးပြွတ်၏ functional ဖြစ်စေဆက်သွယ်မှုတွက်ချက်။ ရရှိလာတဲ့ဆက်သွယ်မှုမြေပုံအဆိုပါ PHs (စတုရန်းအမြစ်) နဲ့ဆက်နွယ်နေကြောင်းခဲ့ကြသည်။ ကျနော်တို့ဘယ်ဘက် dorsolateral prefrontal cortex (DLPFC) အတွင်းဒေသတွေ့ရှိခဲ့ (x = -36, y = 33, z = 48) (ပုံ 1C) အဆိုးကိုပိုမိုညစ်ညမ်းပစ္စည်းကိုလောင်တဲ့သူသင်တန်းသားများကိုလက်ျာ caudate နှင့်လက်ဝဲ DLPFC အကြားလျော့နည်းဆက်သွယ်မှုရှိခဲ့ကြောင်း implicating, PHs နှင့်ဆက်စပ်ခဲ့သည်။ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာယုတ် signal ကိုထုတ် regressed မခံခဲ့ရသည့်အခါရလဒ်မပြောင်းခဲ့ပါဘူး။36
ပစ္စုပ္ပန်လေ့လာမှု၏နယ်ပယ်အတွင်း၌ကျနော်တို့အမျိုးသားများတွင် Self-အစီရင်ခံ PHs နှင့်ဆက်စပ်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံနှင့်အလုပ်လုပ်အာရုံကြောဆက်စပ်စုံစမ်းစစ်ဆေး။ ကျွန်ုပ်တို့၏တွေ့ရှိချက် striatum ၏ညာဘက် caudate ၏ GM ကအသံအတိုးအကျယ်ပိုမိုမြင့်မားညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုနှင့်အတူသေးငယ်ကြောင်းညွှန်ပြ။ ထို့ပြင် striatum ၏ဘယ်ဘက် putamen ၏တာဝန်-related အလုပ်လုပ်တဲ့ activation လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပစ္စည်းပေးအပ်သည်အခါပိုမိုမြင့်မား PHs နှင့်အတူနိမ့်ဖြစ်ရှာတွေ့ခဲ့သည်။ ညစ်ညမ်းတွေကိုစဉ်အတွင်း signal ပြောင်းလဲမှုဘယ်ဘက် putamen လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ conten processing တွင်ပါဝင်ပတ်သက်ကြောင်းညွှန်ပြ, လိုက်ဖက် nonsexual တွေကိုစဉ်အတွင်းထက်ပိုမိုမြင့်မားခဲ့t.
ကျနော်တို့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပစ္စည်းကြည့်ရှုနေစဉ်အတွင်း PHs နှင့် GM ကအသံအတိုးအကျယ်, လက်ျာ striatum (caudate) တွင်ကျဆင်းခြင်းအဖြစ်ပိုမိုမြင့်မား PHs နှင့်အတူလက်ဝဲ striatum (putamen) အတွက် BOLD ကျဆင်းခြင်း၏ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာတွေ့ရှိချက်များအကြားဆက်ဆံရေး disentangle ဖို့စေ့စပ်ဖြန်ဖြေခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာပြုလုပ်ခဲ့သည်။ အလွန်ကန့်သတ်ဖျန်ဖြေခြင်းအကျိုးသက်ရောက်မှုများအလငျး၌, ငါတို့ညစ်ညမ်းစားသုံးမှုသီးခြားရှင်းလင်းအချက်များအဖြစ်အလုပ်လုပ်တဲ့နှင့်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာဆိုးကျိုးများမှတ်. နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကျနော်တို့ညာဘက် caudate အတွက်အခြေခံအဆောက်အဦးစပျစ်သီးပြွတ်ထံမှ functional ဖြစ်စေဆက်သွယ်မှုစူးစမ်းခြင်းနှင့်လက်ဝဲ DLPFC မှဆက်သွယ်မှုကိုပိုမို PHs နှင့်အတူနိမ့်ခဲ့ကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။
သုတေသနတစ်ဦးကကျယ်ပြန့်ခင်းကျင်းဆုလာဘ်အပြောင်းအလဲနဲ့အတွက် striatum ၏အရေးပါမှုကို implicates ။37, 38 အဆိုပါ nonhuman မျောက် striatum အတွက်အာရုံခံပေးပို့တုံ့ပြန်ရန်ပြသပြီ39 နှင့်မျှော်လင့်40 ဆုလာဘ်၏။ ဦးစားပေးဆုလာဘ်ပိုမိုပြင်းပြင်းထန်ထန် Striatal အာရုံခံကုဒ်ဆုလာဘ်ပြင်းအားနှင့်မက်လုံးပေး salience အဖြစ်မီး။41 ကျနော်တို့တွေ့ရတဲ့ striatum အတွက်စောင့်ကြည့်လေ့လာ GM ကစပျစ်သီးပြွတ်ဆုလာဘ်အပြောင်းအလဲနဲ့မှာပြခဲ့ကြကြောင်းတည်နေရာအကွာအဝေးအတွင်းဖြစ်ပါတယ်။
လိင် cue-reactivity ကိုပါရာဒိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ရလဒ်တွေကို fixation နှင့်နှိုင်းယှဉ်လိင်တွေကိုစဉ်အတွင်း PHs နှင့်လက်ဝဲ putamen activation အကြားနှုတ်လက္ခဏာဆောင်သောဆက်စပ်မှုကိုပြ။ ဒီအကြောင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုမှသဘာဝအာရုံကြောတုံ့ပြန်မှုတစ်ခု downregulation အတွက်ညစ်ညမ်းလှုံ့ဆော်မှုရလဒ်များကိုမှပြင်းထန်သောထိတွေ့သည့်အယူအဆနှင့်အညီဖြစ်ပါတယ်။11 လိင်စိတ်နိုးထအတွက် striatum တစ်ခုပါဝင်ပတ်သက်မှုယခင်ကစာပေအတွက်သရုပ်ပြခဲ့သည်။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုနှင့်လိင်စိတ်နိုးထဖို့တုန့်ပြန် cue reactivity ကိုရှာဖွေစူးစမ်းအများအပြားလေ့လာမှုများထိန်းချုပ်မှုလှုံ့ဆော်မှုနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါပု striatum အတွက်ပိုကောင်းလှုပ်ရှားမှုသတင်းပေးပို့ပါပြီ။42- 46 လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုတင်ဆက်ထားပါတယ်ပါဝင်သည်လေ့လာမှုများ striatum ၏တသမတ်တည်းပါဝင်ပတ်သက်မှုပြသခဲ့သည်နှစ်ခုမကြာသေးမီ Meta-ဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်း.47, 48
လုပ်ငန်းလည်ပတ်-ဆက်သွယ်မှုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာများ၏လေ့လာတွေ့ရှိရလဒ်များဦးနှောက်၏ခန္ဓာဗေဒအဖှဲ့အစညျးနှငျ့အညီဖြစ်ကြသည်။ အဆိုပါ caudate နျူကလိယ၎င်း၏နှစ်ဦးနှစ်ဖက်အသှငျအပွငျအထူးသဖြင့်, ထို DLPFC ထံမှဆက်သွယ်မှုကိုလက်ခံရရှိပါတယ်။49, 50 အဆိုပါ prefrontal cortex အများအားဖြင့်သိမြင်မှုထိန်းချုပ်ရေးအတွက်ပတ်သက်သည်ဟုယူဆရထားပြီး51 အဖြစ်တုန့်ပြန်တားစီး, အမူအကျင့်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်, အာရုံစူးစိုက်မှုနှင့်အနာဂတ်စီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်း၌တည်၏။ အဆိုပါ DLPFC, အထူးသဖြင့်, ထို prefrontal cortex ၏အခြားအစိတ်အပိုင်းများနှင့်အတူကောင်းစွာအပြန်အလှန်ချိတ်ဆက်နှင့်သတင်းအချက်အလက်များစွာကိုအမျိုးအစားများကိုကိုယ်စားပြုသည်, တုံ့ပြန်မှုများနှင့်ဆုလာဘ်မှအရာဝတ္ထုသတင်းအချက်အလက်ကနေရောက်ရှိအဖြစ်အရေးယူမဟာဗျူဟာများထွက်ပေါ်လာသည်။51 ထို့ကြောင့် DLPFC အပြုအမူရည်ရွယ်ချက်, စည်းမျဉ်းများနှင့်ဆုလာဘ်နှင့်အတူအာရုံခံအချက်အလက်များ၏ပေါင်းစည်းမှုများအတွက် key ကိုဧရိယာစဉ်းစားသည်။ ဤအချက်အလက်ပေါင်းစည်းမှုမော်တာအပြုအမူအပေါ်သိမြင်မှုထိန်းချုပ်ရေးအားထုတ်ခြင်းဖြင့်အများဆုံးသက်ဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်ချက်၏ပံ့ပိုးမှုမှထင်နေသည်.52 ဒါဟာ frontostriatal ကွန်ယက်ကိုဒီအပြုအမူအတွက်ပါဝင်ပတ်သက်ကြောင်းအဆိုပြုပြီးပါပြီ။ အဆိုပါ Basal ganglia ထံမှ afferent ဆက်သွယ်မှုရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်၏ပြည်တွင်းရေးကိုယ်စားပြုမှုရတာဟာသော prefrontal cortex နဲ့သူတို့ကိုအောင်မြင်ရန်ရန်နည်းလမ်းများမှ valence နှင့် saliency နှင့် ပတ်သက်. သတင်းအချက်အလက်သိရှိစေရန်.51, 53 ဒီ circuitry ၏ကမောက်ကမဖြစ်မှုမသက်ဆိုင်အလားအလာအနုတ်လက္ခဏာရလဒ်၏, ထိုကဲ့သို့သောမူးယစ်ဆေးရှာအဖြစ်မသင့်လျော်အပြုအမူရွေးချယ်မှု, ဆက်စပ်သောထားပြီး.54
ပစ္စုပ္ပန်စုံစမ်းစစ်ဆေးမှာတွေ့ရတဲ့ဦးနှောက်ဒေသများနှင့်အဓိပ္ပါယ်, စွဲလမ်းညစ်ညမ်းစားသုံးမှုအားဖြင့်အတော်လေးမကြာခဏပေမယ့်မပေးနဲ့ဆက်စပ်နေကြသည်။ အဆိုပါ striatum နှင့် DLPFC အတိတ်စုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်းဖြင့်အင်တာနက်ကိုစွဲလမ်းထဲမှာပတ်သက်သည်ဟုယူဆရဦးနှောက်ဒေသများကိုက်ညီတဲ့။ အင်တာနက်စွဲအပေါ်ယခင်လေ့လာမှုများ prefrontal cortical ထူအတွက်လျှောက်လျော့နည်းအစီရင်ခံတင်ပြကြပါပြီ;55 အလုပ်လုပ်တဲ့အတွက်လျော့နည်းစေ,56 အဖြစ်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ, ဆက်သွယ်မှု57 အဆိုပါ frontostriatal ကွန်ယက်; နှင့်တစ်ခုတည်းဖိုတွန်ထုတ်လွှတ်-တွက်ချက် tomography နှင့်အတူတိုင်းတာသည့် striatum အတွက် striatal dopamine Transporter အဆင့်ဆင့်ယုတ်လျော့လေ၏။ ဒါကညာဘက် caudate နှင့်နှစ်ဦးနှစ်ဖက် prefrontal cortex နှင့်လက်ဝဲ putamen အတွက်တာဝန်-related BOLD လှုပ်ရှားမှုတစ်ခုလျှော့ချရေးအကြားအနိမ့် functional ဖြစ်စေဆက်သွယ်မှုမှအထူးသဖြင့်, လက်ျာ caudate အတွက် GM ကတစ်အနုတ်လက္ခဏာဆက်စပ်မှု၏ပစ္စုပ္ပန်တွေ့ရှိချက်နှင့်အတူကောင်းစွာကိုက်ညီ။ ပစ္စုပ္ပန်ရလဒ်များကိုရှင်းလင်းစွာ, အလယ်အလတ်ညစ်ညမ်းစားသုံးမှုနှင့်အတူဆက်စပ်လေ့လာတွေ့ရှိဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာဆက်စပ်ညာဘက် caudate နှင့် PHs အတွက် GM က volume ၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဆက်စပ်မှုရှိသောကြောင့်တစ်ခုပူးတွဲအင်တာနက်စွဲတစ်ခုမျှသာမှလည်းမစပ်ဆိုင်ကြောင်းကိုပြသ အင်တာနက်စွဲ၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှုအဘို့ကိုထိန်းချုပ်ထားစဉ်သိသာသည်။
အခြားတစ်ဖက်တွင်, အ striatum အတွက်ထုထည်ကြီးမားသောခြားနားချက်များယခင်ကထိုကဲ့သို့သောကင်းအဖြစ် pharmacological မူးယစ်ဆေးအမျိုးမျိုးတို့ကိုမှစွဲလမ်းနှင့်ဆက်စပ်ခဲ့ကြ,58 metamphetamine နှင့်အရက်.59 သို့သော် pharmacological မူးယစ်ဆေးဝါးများအတွက်အစီရင်ခံသက်ရောက်မှု၏ညှနျကွားလျော့နည်းခြောဖြစ်၏ အခြားသူများကိုအလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေး neurotoxic သက်ရောက်မှုရှိနေသော်ငြားလည်းနိုင်သော striatal ပမာဏလျှော့ချအစီရင်ခံတင်ပြကြစဉ်အချို့လေ့လာမှုများစွဲ-ဆက်စပ်တိုးအစီရင်ခံတင်ပြကြပါပြီ။59 လက်ရှိလေ့လာမှုမှာလေ့လာတွေ့ရှိသည့် striatal သက်ရောက်မှုအမှန်ပင်ညစ်ညမ်းစားသုံးမှု၏အကျိုးဆက်များမှာ အကယ်. ၎င်း၏လေ့လာမှုလောင်းကစားဝိုင်းအလားတူအနာဂတ်လေ့လာမှုများအဘို့အ neurotoxic တ္ထုများမရှိခြင်းအတွက်စွဲလမ်းအတွက်အခြေခံအဆောက်အဦးစသောအပြောင်းအလဲလေ့လာစူးစမ်းဖို့စိတ်ဝင်စားဖို့အခွင့်အလမ်းကိုတင်ပြစေခြင်းငှါ, အပြုအမူ60 သို့မဟုတ်ဗီဒီယိုဂိမ်းကစား.61, 62 အနာဂတ်သုတေသနလေ့လာတွေ့ရှိအလုပ်လုပ်တဲ့နှင့်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာအကျိုးသက်ရောက်မှုများနှင့်ညစ်ညမ်းစားသုံးမှုအကြားကြောင်းကျိုးဆက်စပ်ဆက်ဆံရေးမျိုး disentangle ဖို့လိုအပ်ပါသည်။
ကျနော်တို့အဖြေရှာတဲ့အမျိုးအစားသို့မဟုတ်စံတန်ဖိုးယူဆချက်မှရှောင်ကြဉ်ဖို့ရွေးချယ်ခြင်းနှင့်အစားကျန်းမာနမူနာအတွက် PHs ၏စင်ကြယ်သောသောက်သုံးသောသက်ရောက်မှုစုံစမ်းစစ်ဆေး။ ညစ်ညမ်းစွဲတစ်ခုလက်တွေ့နှင့်အဓိပ္ပါယ်ပြတ်ပြတ်သားသားယခုအချိန်အထိအပေါ်သဘောတူညီခဲ့မပြုသေးသောကြောင့်သုတေသန၏လက်ရှိပြည်နယ်မှာစံတန်ဖိုးထုတ်ပြန်ချက်များမျက်ခြေမပြတ်ကြသည်မဟုတ်။ အဆိုပါအပြုသဘော PHs နှင့်စိတ်ကျရောဂါများအကြားအသင်းအဖွဲ့အဖြစ်အရက်သုံးစွဲခြင်း, ညစ်ညမ်းစားသုံးမှုစိတ်ရောဂါသုတေသနများ၏အခြေအနေတွင်နောက်ထပ်စူးစမ်းသင့်ကြောင်းအကြံပြုထားသည်။ အနာဂတ်စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေအတူတူပင်ဦးနှောက်ဒေသများပါဝင်ပတ်သက်နေကြသည်ရှိမရှိကိုသိရှိနိုင်ဖို့စွဲကြသည်မဟုတ်သူကိုတစ်ဦးချင်းစီနှင့်အတူညစ်ညမ်းစွဲရှိခြင်းအဖြစ်ရောဂါတစ်ဦးချင်းစီ၏အုပ်စုများနှိုင်းယှဉ်သင့်ပါတယ်။ ကျနော်တို့သုတေသန၏ဤလိုင်းညစ်ညမ်းစွဲပုံမှန်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုနဲ့စဉ်ဆက်ပေါ်မှာတစ်ခုသို့မဟုတ်ကွဲပြားအမျိုးအစားအဖြစ်ကုသထားရမည်ရှိမရှိ၏မေးခွန်းကိုသို့တန်ဖိုးရှိသောထိုးထွင်းသိမြင်မှုကိုလိုက်လျောပါလိမ့်မယ်တွက်ဆထားကြောင်းသိရသည်။
လေ့လာမှုတစ်ခုအလားအလာန့်အသတ်ကျနော်တို့ Self-အစီရင်ခံ PHs ပေါ်နှင့်ခေါင်းစဉ်အချို့သင်တန်းသားများအဘို့အထိခိုက်မခံတဲ့ပါပြီစေခြင်းငှါအားကိုးခဲ့တာပါပဲ။ သို့သော်ပါဝင်မှုရှေ့တော်၌တယ်လီဖုန်းအင်တာဗျူးစဉ်အတွင်း, တစ်ဦးချင်းစီပါဝင်မှုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများနှင့်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုနှင့်ပတ်သက်သောမေးခွန်းအတွက်ဖြည့်ဆည်းပတ်ဝိုင်းမယ်လို့ပြောကြားခဲ့ကြသည်နှင့်အကြှနျုပျတို့သညျဤအဆင့်တွင်အဘယ်သူမျှမကျောင်းထွက်ခဲ့ရသည်။ underreporting ဆန့်ကျင်နေတဲ့ကြိုတင်ကာကွယ်မှုအဖြစ်ကျနော်တို့သင်တန်းသားများကိုစမ်းသပ်သည့်တစ်ဦးချင်းစီမှအဖြေလင့်ထားသည်အံ့သောငှါအလားအလာစိုးရိမ်ကာကွယ်တားဆီးဖို့ကွန်ပျူတာပေါ်တွင်မေးခွန်းလွှာအတွက်ဖြည့်ပါရှိခဲ့ပါတယ်။ ထို့အပွငျစမ်းသပ်ထပ်တလဲလဲအသုံးပြုတဲ့လျှို့ဝှက်ချက်များနှင့်သိုဝှက်လုပျထုံးလုပျနညျးအလေးပေးပြောဆိုခဲ့သည်။ အနာဂတ်လေ့လာမှုများကအင်တာနက်ပေါ်တွင်တစ်ဦးချင်းစီ '' ရှာဖွေရေးသမိုင်းကနေဓမ္မဓိဋ္ဌာန်ဒေတာကို အသုံးပြု. ထည့်သွင်းစဉ်းစားလိမ့်မည်။
အစီရင်ခံအဆိုပါ striatal စပျစ်သီးပြွတ် GM ကဆံ့ပေမယ် caudate နှင့် putamen အကြားကပ်လျက် WM သို့ချဲ့ထွင်ထားခြင်းသာ။ ဒီအဓိပ္ပာယ်ပြည့်သို့မဟုတ်ပုံမှန်ပြဿနာတစ်ခုကလက်ရှိအဆင့်မှာဖြေရှင်းမရနိုငျရှိမရှိ။ သို့ရာတွင်ထိုသို့ပျံ့နှံ့ tensor ပုံရိပ်နှင့်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုအကြားအသင်းအဖွဲ့များစူးစမ်းဖို့စိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်နိုင်သည်။
abstraction | နည်းလမ်းများ ရလဒ် | ဆွေးနွေးချက် | နိဂုံး | ဆောင်းပါးသတင်းအချက်အလက်များ ကိုးကား
အတူတူယူ, တဦးတည်းညစ်ညမ်းထိတွေ့မှုကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့အတွက်မကြာခဏဦးနှောက်ကို Activation ဝတ်ထားနှင့်အခြေခံဦးနှောက်ဖွဲ့စည်းပုံအဖြစ် function ကိုများနှင့်ပြင်ပအကျိုးကိုစနစ်၏ဆွနဲ့တစ်ဦးစိတ်သဘောထားများအတွက်ပိုမိုမြင့်မားလိုအပ်ကြောင်း downregulation ဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြအံ့သောငှါယူဆဖို့စုံစမ်းသွေးဆောင်ခြင်းကိုခံစေခြင်းငှါ ဝတ္ထုနှင့်ပိုပြီးအစွန်းရောက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပစ္စည်းကိုရှာ။ ဤသည် Self-ကြူးဖြစ်စဉ်ကိုအနိမ့် striatal dopamine အဲဒီ receptor ရရှိနိုင်မှုနှင့်အတူတစ်ဦးချင်းစီမူးယစ်ဆေးဝါးများနှင့်အတူမိမိတို့ကိုယ်ကို medicate မှယူဆနေကြသည်ဘယ်မှာမူးယစ်ဆေးစွဲအတွက်အဆိုပြုထားသောယန္တယား၏အလငျး၌အနက်နိုင်တွေးဆ.63 သို့သော် striatum အတွက် PHs နှင့်အတူလေ့လာတွေ့ရှိထုထည်ကြီးမားသောအသင်းအဖွဲ့ထိုနည်းတူတစ်ဦးမရှိမဖြစ်လိုအပ်ချက်ထက်မကြာခဏညစ်ညမ်းစားသုံးမှု၏အကျိုးဆက်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ အောက်ပိုင်း striatum အသံအတိုးအကျယ်နှင့်အတူတစ်ဦးချင်းစီအပျြောအပါးကိုတွေ့ကြုံခံစားဖို့ပိုပြင်ပဆွလိုအပ်နိုင်ပါသည်ထို့ကြောင့်ပိုပြီးကြိုးအဖြစ်ညစ်ညမ်းစားသုံးမှုကိုတွေ့ကြုံခံစားစေခြင်းငှါ, အရာပိုမိုမြင့်မား PHs မှအလှည့်ခဲထဲမှာ may ။ အနာဂတ်လေ့လာမှုများ longitudinal ညစ်ညမ်းများ၏သက်ရောက်မှုကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးရန်သို့မဟုတ်ညစ်ညမ်းရင်တော့မှားမယ်သင်တန်းသားများကိုဖော်ထုတ်နှင့်အကျိုးကိုစနစ်၏တစ်ဦး downregulation အတွက်ရရှိလာတဲ့, ညစ်ညမ်းလှုံ့ဆော်မှုမှပြင်းထန်သောထိတွေ့မှု၏အဆိုပြုယန္တရားများအတွက်နောက်ထပ်သက်သေသာဓကများကိုအချိန်ကျော်ကြောင်းကျိုးဆက်စပ်သက်ရောက်မှုကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးရန်သငျ့သညျ။
သက်ဆိုင်ရာ Author: ဆီမှKühn, Ph.D ကမူ Max Planck လူ့ဖွံ့ဖြိုးရေးအင်စတီကျု, သက်တမ်းစိတ်ပညာအဘို့အစင်တာ, Lentzeallee 94, 14195 ဘာလင်, ဂျာမနီ ([အီးမေးလ်ကိုကာကွယ်ထားသည်]).
ပြည်သူများအဘို့အ Submitted: နိုဝင်ဘာလ 27, 2013; နောက်ဆုံးတည်းဖြတ်မူဇန်နဝါရီလ 28, 2014 လက်ခံရရှိ; ဇန်နဝါရီလ 29, 2014 လက်ခံခဲ့သည်။
အွန်လိုင်း Published: , 28 2014 နိုင်ပါစေ။ Doi: 10.1001 / jamapsychiatry.2014.93 ။
စာရေးသူထောက်ပံ့: DRs Kühnနှင့် Gallinat လေ့လာမှုအတွက်အချက်အလက်များ၏လူအပေါင်းတို့အားအပြည့်အဝသုံးစွဲနိုင်ခဲ့များနှင့်ဒေတာများ၏သမာဓိနှင့်ဒေတာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာများ၏တိကျမှန်ကန်မှုကိုများအတွက်တာဝန်ယူပါ။
သိမ်းယူမှု, analysis သို့မဟုတ်အချက်အလက်များ၏အနက်: နှစ်ဦးစလုံးစာရေးဆရာများ။
, အုပ်ချုပ်ရေးနည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ, ဒါမှမဟုတ်ပစ္စည်းထောက်ခံမှု: နှစ်ဦးစလုံးစာရေးဆရာများ။
လေ့လာမှုကြီးကြပ်: Gallinat ။
ရန်ပုံငွေရှာခြင်း / ပံ့ပိုးမှု: ဤလုပ်ငန်းကိုထောက်ပံ့ငွေ BMBF 01GS08159, DFG GA707 / 6-1 နှင့် BMBF 01 GQ 0914 နေဖြင့်အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်အတွက်ထောက်ခံသည်။
ဆုံးမခြင်း: ဤဆောင်းပါးသည်ဇွန်လ 6, 2014 အပေါ် Abstract အတွက်သတ်ပုံအမှားအဘို့အအွန်လိုင်းတညျ့ခဲ့သည်။